waano ku aadan Dumarka
Subject: waano ku aadan Dumarka Sun Aug 01, 2010 9:27 pm
1-Khalqiga Illaahay wax bedelay waa in ay ku jirin:- Jirkaaga waa amaano,abuurka alle oo aad bedesho waa talo shaydaan, waa tilaabo shaydaan.
2-Jirka oo la xardho(washmi) waa in aad jirka wax dhexgaliso:- Tusaale waa jirka oo la bedelo oo wax lagu qoro ama wax lagu sawiro.
3- Timaha oo timo kale lagu xiro sida Buruko:- Rasuulka S.C.W waa nacladay tan samaysa iyo tan loo sameeyay. Sidoo kale waxaa laga wariyey Mucaawiye Binu Sufyaan Rasuulku S.C.W wuxuu yiri reer binu Israa,iil waxay halaagsameen markii timo timo ku xireen.
4- Timaha wajiga(suniyaha) oo la jaro ama la salaxo(la xiiro).
5- Ilkaha oo la simo waa la diiday.
6- Timaha oo la madoobeeyo:- Dadka timaha madoobeeya Janada carafteeda ma helayaan, janada carafteedana waxaa laga helaa meel 500 sano loo socdo.Asxaabigii Jaabir waxaa lagu yiri aabahaa timaha kalar kale u samee, micnaha madoobayso ka ilaali, tan kale waa xaaraan qofka iibiya.
7- In la bedelo jirka midibkiisa oo lagu bedelo mid kale.
8-Waa in aan la isu ekeysiin Gaalada:- Rasuulku S.C.W wuxuu yiri Qofkii qoom isu ekeysiiiya iyaguu la mid yahay. sidoo kale Rasuulku S.C.W wuxuu noo sheegay gaalada sidaan u daba galayno, in aan la galayno haday galaan god Abeeso, godka Abeesada waa madoow, waa ciriiri, hadana waa qarmuun.
9-Timaha midoobaa oo midab kale loo bedelo, afkiina waa la gaduudinaya.
10-Maryaha gaagaaban, Surweel inaad qaadato, sidoo kale dhar kugu dhegan in aad qaadato:- Tusaale gabadha Muslimada ah waxaa looga baahan yahay in ay qaadato dhar xijaab ah oo waasic ah, oo aan ku dhaganayn.
Subject: Re: waano ku aadan Dumarka Tue Aug 17, 2010 3:46 pm
maaa shaa alaah walaal waa waano booskeeda imaatay walaalah maamulkane waxaan ka codsanaa muhiimnaanta mawduucaan dartiisa inay ka dhigaan mawduucaan mid sugnaada ama muthabat ama muhiim
Subject: Re: waano ku aadan Dumarka Sun Aug 22, 2010 1:08 pm
anigane codkeeda ayaan ku biirinayaa codsiga maamulka
Subject: Re: waano ku aadan Dumarka Sun Aug 22, 2010 1:34 pm
mahad sanidiin dalabkeena waa laydinka aqbalay
Subject: Re: waano ku aadan Dumarka Sun Aug 22, 2010 10:13 pm
Runtii aad ayaan uga farxay tacliiqiina wanagsan iyo sida aad ula socotaan maqaalooyinka muhiimka ah waxan isku dayi doonaa INSHA ALAH kuwo kale oo aad u muhiim ah inaan idin soo bandhigo
Subject: Re: waano ku aadan Dumarka